ခြီးမှမျးခွငျးကိုးကှယျခွငျး - Full Gospel Music
HomeVol-1 (Praise and Worship)FFull Gospel Musicခြီးမှမျးခွငျးကိုးကှယျခွငျး
Full Gospel Music
1 ယဟေောဝါရှလုမျ 0:00
2 သခွေငျးမရှိထိုနရေ့ကျ၌ 0:00
3 ကြှနျုပျအသကျတာ လှပတငျ့တယျ 0:00
4 မစိုးရိမျနှငျ့ 0:00
5 ငါ့ကိုချေါသောအခါ ငါထူးမညျ 0:00
6 ထာဝရမတ်ေတာတျော 0:00
7 ဘုနျးကွီးပါစသေျော 0:00
8 ဆာလံ-၄၂ 0:00
9 နာမတျောကိုခြီးမွောကျမညျ 0:00
10 ထူးဆနျးနိုးထမှု 0:00
11 ကားလျမဲတောငျမှာ 0:00
12 ပနျလှမျးခဲ့ပါ ခဈြမိတျဆှေ 0:00
13 ထိုကဲ့သို့ပငျ 0:00
14 အိုအံ့ဖှယျကွီးမားသောမတ်ေတာ 0:00
15 ဟာလလေုယဘုနျးကွီးရှငျ 0:00
16 ကိုယျတျောမှတဈပါးမရှိ 0:00
17 ယရှေုကိုကိုးကှယျမညျ 0:00
18 ကြေးဇူးတျောကြှနျုပျအတှကျလောကျ၏ 0:00
19 ခြီးမွောကျမညျ 0:00
Album Name - ချီးမွမ်းခြင်း ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း (Praise & Worship)
This is the very first album of Full Gospel Music, produced in 1996.
This album consists (19) songs.
These songs are translated from anointed english songs and chin songs.
Available Tape only.Worship Leader- Aye Aye Than
ဒီစီးရီးက Full Gospel Music မှ ၁၉၉၇ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးထုတ်လုပ်ထားသော စီးရီးဖြစ်သည်။ ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်ကိုးကွယ်ခြင်းသီချင်း(၁၉) ပုဒ်ပါဝင်သည်။ ချင်းသီချင်းနှင့်အင်္ဂလိပ်သီချင်းများမှဘာသညပြန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်ထိုခါတွင် ခေတ်စားသော Tape Version နှင့်သာထုတ်လုပ်ထားသည်။
(၀၃) ကျွန်ုပ်အသက်တာ လှပတင့်တယ်
(၀၅) ငါ့ကိုခေါ်သောအခါ ငါထူးမည်
(၀၇) ဘုန်းကြီးပါစေသော် (E)
(၀၈) ဆာလံ-၄၂ (E)
(၀၉) နာမတော်ကိုချီးမြောက်မည် (E)
(၁၀) ထိုးဆန်းနိုးထမှု (c)
(၁၂) ပြန်လှမ်းခဲ့ပါ ချစ်မိတ်ဆွေ
(၁၅) ဟာလေလုယဘုန်းကြီးရှင် (E)
(၁၆) ကိုယ်တော်မှတစ်ပါးမရှိ (E)
(၁၇) ယေရှုကိုကိုးကွယ်မည် (E)
(၁၈) ကျေးဇူးတော်ကျွန်ုပ်အတွက်လောက်၏ (E)
(၁၉) ချီးမြောက်မည် (E)
Vol-1 (Praise and Worship)
Vol-2 (Pour out Holy Spirit)
Vol-3 (You alone deserve to praise)
Vol-4 (Above All)
Live 2001 (Heal our Land)
Live 2002 (Thy Kingdom Come)